Balotelli oo sheegay inuu Kubadda Dahabka ah uu siin lahaa ciyaaryahan aan ahayn Messi iyo Ronaldo (Waa kee?) – Gool FM
Balotelli oo sheegay inuu Kubadda Dahabka ah uu siin lahaa ciyaaryahan aan ahayn Messi iyo Ronaldo (Waa kee?)
Haaruun November 7, 2016
(Nice), 07 Nof 2016 –Laacibka kooxda Nice ee Waddanka Faransiiska, Super Mario Balotelli ayaa shaaca ka qaaday in haddii dooqiisa la tixgelin lahaa uu kubadda Dahabka ah siin lahaa sanadkan xiddig aan ahayn Messi iyo Ronaldo.
Mario oo wareysi siiyay ‘Telefoot’ ayaa waxa uu xusay in Ballon d’Or 2016 uu mudan yahay isla markaana siin lahaa Weeraryahanka Barcelona iyo Uruguay Luis Suarez.
“Sanadkan Kubadda Dahabka waxaan siin lahaa Suarez” ayuu Balotelli u sheegay Telefoot.
Dhinaca kale Telefoot ayaa isla markiiba daawadayaashiisa weydiiyay cidda ay u arkaan in sanadkan ay u qalanto Ballon d’Or, waxaana daawadayaashu ay 50% sheegeen inuu abaalmarintan u qalmo Cristiano Ronaldo oo Weerarka uga dheela Real Madrid, waxaa xigay Dhaliyaha Atletico Madrid iyo Faransiiska Antoine Greazmann (28%) haka Messi oo Barcelona u ciyaarana helay 18%.
Guardiola oo ka hadlay dhibaatada haysata kooxdiisa
Muxuu van Persie ka yiri dhaawicii ka soo gaaray ISHA ee la sheegay inuuba Indhoole u noqon karay!?